Mac မှာ ဗီဒီယိုကို အမြန်ရွေ့လျားနည်းနဲ့ တင်နည်း ကျွန်တော်က mac ကပါ။
Mac တွင် အမြန်ရွေ့လျားမှုဖြင့် ဗီဒီယိုတစ်ခု တင်နည်း
Ignatius ခန်းမ | | Mac ပရိုဂရမ်များ, လဲ tutorial
မိသားစုဗီဒီယိုများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည့်အခါမှလွဲ၍ အဆင်မပြေနိုင်ပါ။ ဘယ်သူကမှ သူငယ်ချင်းဆီ သွားလည်ရတာ မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ အားလုံးမြင်အောင်ကြည့် သင်၏နောက်ဆုံးအားလပ်ရက်တွင် ရိုက်ကူးခဲ့သော ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများ. ဤဗီဒီယိုများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေလိုသောအကြောင်းအရာကိုရှာဖွေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကျဉ်းချုပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်လိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေလိုသောအကြောင်းအရာကိုရှာဖွေရန် နာရီနှင့်နာရီများ (ကျွန်ုပ်တို့ရိုက်ကူးထားသောဗီဒီယိုအရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍) ကြည့်ရှုရပါမည်။
ဤလုပ်ငန်းကို ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့် ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏စုစည်းမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထည့်လိုသည့်အချိန်အတိအကျကို အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်စေရန်အတွက် အမြန်ကင်မရာတွင် ဗီဒီယိုများကို ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သိချင်ရင် ဗီဒီယိုကို Mac တွင် အမြန်ရွေ့လျားနည်းဖြင့် တင်နည်းငါဆက်ဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်
ဗီဒီယိုများကို လျင်မြန်စွာ ရွေ့လျားထည့်သွင်းသည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။. ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်လိုသည့်အခိုက်အတန့်ကို ရှာဖွေရန်သာ ဗီဒီယိုကို အရှိန်မြှင့်လိုပါက သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ဗီဒီယိုကို အရှိန်မြှင့်ပြီး ၎င်းကို အရှိန်မြှင့်ကာ သိမ်းဆည်းလိုလျှင် ဆိုလိုသည်။
အမြန်ရွေ့လျားမှု ဗီဒီယိုများသည် အကြိမ်များစွာတွင်၊ ဟာသအခိုက်အတန့်များ သာမန်အမြန်နှုန်းဖြင့် အဓိပ္ပါယ်မရှိသလို ကျေးဇူးတရားလည်းမရှိ၊ ထို့ကြောင့် ဤရွေးချယ်မှုကို သင်မစဉ်းစားခဲ့လျှင် ၎င်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗီဒီယိုများနှင့် အလုပ်လုပ်ရပါက Apple ၏ အခမဲ့ ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူ iMovie အကြောင်း ပြောရမည်ဖြစ်သည်။ iMovie ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗီဒီယိုများကို ဖွင့်ကြည့်ရုံသာမကဘဲ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ အရှိန်မြှင့်ထားသော ဗီဒီယိုများကို ကျွန်ုပ်တို့ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်ကစားသမားတွင်မဆိုကစားရန်။
iMovie က ကျွန်တော်တို့ကို ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဗီဒီယိုများ၏အမြန်နှုန်းကိုမွမ်းမံပါ။အက်ပ်အတွင်းရှိ ကလစ်များဟု ခေါ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဗီဒီယိုတစ်ခုစီ၏ သီးခြားအဖွင့်နှုန်းကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန်၊ ၎င်းကို ထုတ်ယူပြီး ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နေသည့် အကျဉ်းချုပ်ဗီဒီယိုတွင် ထည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။
iMovie ရှိ ကလစ်တစ်ခု၏ ပြန်ဖွင့်နှုန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မွမ်းမံလိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ ပထမဆုံးလုပ်ရမည့်အရာမှာ မေးခွန်းရှိကလစ်ကို ရွေးပါ။
ထို့နောက်၊ ရွေးချယ်စရာမီနူးကို ပြသမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ထိုဗီဒီယိုဖြင့် တည်းဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေမည့် မီနူးတစ်ခု ပြသမည်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမီနူးမှာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမယ်။ အမြန်နှုန်းပြကိရိယာကို ပြသသည့် အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။ နှင့် Speed ​​အမည်ကိုပြသခြင်း။
ထို့နောက် menu အသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထိုမီနူးတွင်၊ ရွေးချယ်မှုတွင် အရှိန်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့် မှန်ကန်သောအမြန်နှုန်းကို မရှာမချင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသောဆက်တင်များဖြင့် ကစားရပါမည်။
အပြောင်းအလဲတွေအားလုံးကို ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်။ သူတို့က ပြောင်းပြန်၊ ပရောဂျက်ကို သိမ်းဆည်းထားသော်လည်း၊ ထို့ကြောင့် ဗီဒီယိုတစ်ခု၏ ဖွင့်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ရန် သို့မဟုတ် နှေးကွေးစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ဝင်စားသည့် ရွေးချယ်စရာအားလုံးကို စမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယိုကို ဖွင့်သောအခါတွင် ရွေးချယ်ထားသော အမြန်နှုန်းပေါ်မူတည်၍ မြန်သည်၊ အသံကို နားမလည်နိုင်ပါ။. ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဗီဒီယိုမှအသံကိုဖယ်ရှားပါ။. Third-party applications တွေကို အားကိုးစရာမလိုဘဲ iMovie နဲ့လည်း ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း၊ ဤပြောင်းလဲမှုများသည် ရွေးချယ်ထားသောကလစ်ကိုသာ အကျိုးသက်ရောက်ပါမည်။ ပရောဂျက်တစ်ခုလုံးမဟုတ်ပါ။
ဤလျှောက်လွှာကိုလည်း eiPhone နှင့် iPad နှစ်မျိုးလုံးအတွက် ရနိုင်သည်၊ တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် iPhone တွင်မှတ်တမ်းတင်ပါက၊ ၎င်းတို့အား သင်၏ Mac သို့လွှဲပြောင်းရန်မလိုဘဲ သင့်မိုဘိုင်းပေါ်ရှိ ဗီဒီယိုများကို တိုက်ရိုက်အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်အမြဲပြောသလိုပဲ VLC အကြောင်းကို ထပ်ပြောပါရစေ။ စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုဖွင့်စက် စျေးကွက်ရှိမိုဘိုင်းနှင့် desktop ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်၊ ၎င်းသည် ဖော်မက်တစ်ခုစီတိုင်းနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့်သာမက ၎င်းသည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး open source ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
VLC သည် all in one ဖြစ်သည်။ ဗီဒီယို သို့မဟုတ် တေးဂီတဖိုင်ကို ဖွင့်ခွင့်ပေးသည့်အပြင်၊ ဗီဒီယိုတစ်ခုမှ အသံကို ဖယ်ရှားနိုင်မှုကဲ့သို့သော နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်ချက်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ YouTube ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ...
ပြန်ဖွင့်ခြင်းရွေးချယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ VLC က ကျွန်ုပ်တို့ကို ခွင့်ပြုသည်။ ဗီဒီယိုဖွင့်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပါ။iMovie ကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရလဒ်ကို ဖိုင်တစ်ခုသို့ တင်ပို့၍မရသော်လည်း၊ ထို့ကြောင့် ဤအပလီကေးရှင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုများ၏ ကလစ်များတွင် ရှာဖွေရန်နှင့် အနှစ်ချုပ်ဗီဒီယိုတွင် ထည့်သွင်းလိုသော ဤအပလီကေးရှင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
မသန်စွမ်း VLC မှတစ်ဆင့် ဗီဒီယိုဖွင့်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပါ။အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်။
ဗီဒီယိုကို အပလီကေးရှင်းဖြင့် သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်းမှ ဖွင့်ပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မီနူးသို့ သွားပါ။ မျိုးပွားခြင်း လျှောက်လွှာ၏ထိပ်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤမီနူးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ရှာဖွေသည်။ အရှိန် ပြီးလျှင် Faster သို့မဟုတ် Faster (တိကျသော) ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဤနောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြန်ဖွင့်သည့်အမြန်နှုန်းကို ပိုမြန် သို့မဟုတ် နှေးစေရန် ချိန်ညှိနိုင်စေပါသည်။
သင်လုပ်နိုင်သည် VLC ကို download လုပ်ပါ မှတဆင့် macOS အတွက် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဒီ link ။
ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည့် Soy de Mac တွင် ယခင်ကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့ဖူးသည့် အခြားဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac သည် iMovie နှင့် မကိုက်ညီပါက ၎င်းသည် Cute Cut ဖြစ်သည်။Cute Cut ပါ။ ဤအပလီကေးရှင်း၊ ၎င်း၏အခမဲ့ဗားရှင်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ဗီဒီယိုပြန်ဖွင့်ခြင်းအမြန်နှုန်းကို ပြောင်းလဲနိုင်စေပါသည်။
iMovie သည် ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို ခံစားနိုင်ရန် macOS 11.5.1 လိုအပ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် ဗားရှင်းအဟောင်းများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ယခင်ဗားရှင်းများဖြင့် စီမံခန့်ခွဲသော ကွန်ပျူတာများတွင်၊ သို့သော် ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။
အကယ်၍ သင့်အဖွဲ့သည် နှစ်အနည်းငယ်၊ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုထက်ပိုပါက၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည်။ iMovie ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်၍မရပါ။ ၎င်း၏ဗားရှင်းများအဘယ်သူမျှမ။
Cute Cut သည် OSX 10.9 တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ဖော်ပြချက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သကဲ့သို့၊ စျေးကွက်တွင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်က စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သော ဗားရှင်းဖြစ်သည်။
မသန်စွမ်း Cute Cut ဖြင့် ဗီဒီယိုတစ်ခု၏ ပြန်ဖွင့်နှုန်းကို မွမ်းမံပါ။အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်။
Cute Cut ဖြင့် ဗီဒီယိုတစ်ခု၏ ဖွင့်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ရန် သို့မဟုတ် နှေးကွေးစေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် iMovie ကဲ့သို့ပင်၊ ဗီဒီယိုသီချင်းကို ရွေးပါ။ အရှိန်မြှင့်ချင်တယ်၊
ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုနေရာသို့ ဦးတည်သွားကြသည်။ အက်ပလီကေးရှင်း၏ညာဘက်ထောင့်ရွေးချယ်ထားသောကလစ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည့် ချိန်ညှိမှုများအားလုံးကို ပြသထားရာ၊
ဤကဏ္ဍတွင် ရှာဖွေပါ။ Speed ​​ဟူသော စကားလုံးဘေးတွင် ပြသထားသော ရွေးချယ်ကိရိယာ ပြန်ဖွင့်နှုန်းကို တိုးမြှင့်ရန် ၎င်းအား ညာဘက်သို့ ရွှေ့ပါ။
iMovie ကဲ့သို့ပင် Cute Cut ဖြင့် ဗီဒီယို သို့မဟုတ် အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ ပြန်ဖွင့်နှုန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ လွတ်လပ်သောလမ်းအတွက်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကို မထိခိုက်စေဘဲ၊
အခမဲ့ဗားရှင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသောကန့်သတ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်သာဖြစ်သည်။ အများဆုံး စက္ကန့် 60 အရှည်ရှိသော ဗီဒီယိုများကို တည်းဖြတ်ပါ။ ရေစာပါ ပါဝင်ပါသည်။
ချစ်စရာ CUT - ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူအခမဲ့
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Mac တွင် အမြန်ရွေ့လျားမှုဖြင့် ဗီဒီယိုတစ်ခု တင်နည်း
DigiTimes ၏ အဆိုအရ လာမည့် 27-လက်မ iMac တွင် LCD panel နှင့် miniLED မပါရှိမည်ဖြစ်သည်။
27-လက်မ iMac အသစ်သည် လက်ရှိထွက်ရှိထားသော အရောင်များနှင့် အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။